Day: Mee 12, 2020
Anyị kwesịrị ichebe ụlọ ọrụ maka ịnya ụgbọ elu
N'ikwu na ihe ndị dị na ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-emetụta mbupụ mbupụ, Eskişehir OSB Onye isi Nadir Küpeli kwuru, “Ihe ndị na-eme na ụlọ ọrụ ụgbọ elu ụwa bidoro emetụta mpaghara mbupụ anyị, ụlọ ọrụ ụgbọ elu, nke bụ anya ụlọ ọrụ Eskişehir. Nchebe na [More ...]
Nkwupụta nke TCDD kwuru, ekwuru na a ga-eme spraying n'okporo ụzọ ụgbọ oloko na adresị ndị akọwapụtara maka ụbọchị iri ekwesịghị ịbịaru nso. The Republic of Turkey State Railways (TCDD), n'agbata 10 May 14 June 1 site na General Directorate nke ụbọchị; Konya-Akşehir, [More ...]
Njikwa ike nke Shoppinglọ Ahịa andzụ ahịa na Ọhaneze Ankara
Ndị uweojii na Ankara Metropolitan Municipality na ndị otu ngalaba ahụike ahụike mechiri nyocha ha mgbe emepee Shoppinglọ Mgbakọ na Publiclọ ahịa Ọhaneze, nke emechirila nwa oge n'ihi usoro coronavirus kemgbe 21 Mach. Ndị mmadụ [More ...]
Nkwado ịdị ọcha na-aga n'ihu maka ndị ahịa Dolmuscu na Ankara
Ngalaba ndị uwe ojii nke Ankara Metropolitan na-aga n'ihu na-akwado ndị ahịa dolmus nke ọrụ ha belatara n'ihi ntiwapụ nke Coronavirus. Na mgbakwunye na usoro mmerụ ahụ dị na obere obere ụlọ, Ankara malitere ikesa ngwugwu nri n'ihi Ramadan. [More ...]
2/7 Asiflt Shed maka -bọchị Curbọchị-24 for the Capital
N'ime oke ọgụ megide ọrịa coronavirus, Ankara Metropolitan Obodo rụrụ ọrụ 2/7 na asphalt na ngagharị ụbọchị ụbọchị 24 kwupụtara na Isi obodo na isi obodo. Site na Altındağ ruo Çankaya, site na Etimesgut rue Yenimahalle, dị ihe iri ise na ise n'obodo ahụ [More ...]
Anabataghị Coronavirus dị ka ihe ọghọm Ọrụ
Ngalaba Iwu Legallọ Ọrụ Eskişehir kwadebere nyocha nyocha banyere ọnọdụ iwu nke ndị mmadụ na-arịa ajọ ọria coronavirus. N'ime akụkọ a kwadebere, banyere ọnọdụ iwu ndị mmadụ na-ejide na coronavirus na-arụ ọrụ ma ọ bụ na mpụga ebe ọrụ. [More ...]
Nyochaa maka Transportgbọ njem Ahụike
Nyocha ndị otu ndị uwe ojii nke obodo Kayseri na ozi gbasara nnabata na usoro coronavirus na-aga n’ihu na-akwụsịlata. Ndị otu uwe ojii gwara ndị ọkwọ ụgbọala maka taxi. Ndi otu uwe ojii nke obodo ukwu na ano na-akwụsị tagzi [More ...]
Ala nke abụọ mepere Gültepe na Grolọ Ahịa Ndị mmadụ
Obodo İzmir nke mepere emepe mepere ngalaba nke abụọ nke Halkın Bakkalı, nke etinyere aka na Kemeraltı Bazaar, na Gültepe District nke Konak. Onye isi oche Tunç Soyer na mmeghe na ntinye nke mmadụ ole na ole n'ihi usoro coronavirus: “Ihe dị oke mkpa [More ...]
Nnukwu Mmasị na nyocha ihe nkiri sinima n'èzí! Ihe ndekọ emebiela na sekọnd 19
Ihe nkiri sinima nke Izmir Obodo ukwu n’abalị iri na ise n’abali Fraịdee dọtara mmasị dị ukwuu. Emechara idebanye aha ahụ n'ime sekọnd iri na itoolu na ihe omume ebe a ga-enyocha ihe nkiri "Ndị Nzụkọ" n'otu oge n'otu oge. emume [More ...]
Ikike nnabata ndị ọhaneze maka Gendarmerie na ndị ọrụ nchekwa Coast
Gendarmerie na ndị ọrụ nchekwa Coast so na ndị na-erite uru na njem njem ọha na-akwụghị ụgwọ. Iwu Onye Isi ala bidoro na 8 Mee. Gendarmerie na Coast nye ndị ọrụ mmanye iwu na-enwe obi ụtọ iji ụgbọ njem ọhaneze na Turkey [More ...]
N'ime arụmọrụ ndị otu ndị otu ahia na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ịzụ ahịa na ọnụ ụzọ Kapıkule, ọnụ ọgụgụ nchekwa 8 puku 800 nwere ọnụ ahịa ruru nde 573 puku liras. General Directorate nke Mmanye Ndị Ọrụ Ngwa [More ...]
Ndi ndu “ndi n’achu oria virus” n’uwa na achikota ikwusi mgbasa nke oria n’iru n’iru site n’itinye nje nile n’anu anumanu nke puru ibute oria mmadu n’ime anumanu. Otu mmekorita nke sayensi a na-akpọ Global Virome Project [More ...]
Rodọ aka na ntị Coronavirus nye ndị ọrịa obi
Prọfesọ Dr. Timur Timurkaynak kwuru, “Ha kwesịrị idobe ọbara mgbali ha na shuga. Washingsacha aka gi ugboro ugboro. Iji mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị mma, ihi ụra mgbe niile, nri na-edozi ahụike, nri nri ndị metụtara oke osimiri Mediterranean, mmanya na-egbu oke [More ...]
BTS: 'Anyị agaghị agbachi nkịtị maka mbufe Sirkeci Port Mpaghara na Yeşilay'
United Transport Employees Union (BTS) mara ọkwa na ahịrị iji rute n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na ebe ndị a ga-eji rụọ ọrụ na mpaghara Sirkeci Port na ebe a ga-eji rụọ ọrụ erutela ọkwa nke nkwadebe maka usoro. BTS Central Executive Board [More ...]
Ofesi Hit Songs? Ntuliaka 2019-2020?
N'ime abụ ndị bịara abịa mba ọzọ, enwere abụ na-aga nke ọma. egwu nke mba ọzọ, ọbụlagodi na ị maghị ihe ọ pụtara, nwere ike ịnwe egwu na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali. Ya mere, ọtụtụ n’ime ha bụ ndị mba ọzọ [More ...]
Şakir Zümre edeghị nkọwa ya n'ụzọ zuru ezu. Ikekwe ọ chọtaghị oge iji dee ya. Şakir Zümre nwere obi iru ala. O kwughi banyere oru ala nna ya ma obu enyi ya na Atatürk. [More ...]
A mụrụ ya na July 6, 1925, dị ka nwa gọvanọ district na Lice district nke Diyarbakır. Akụkụ otu nne si n'oké osimiri ojii, akụkụ nke nna sitere na ezinụlọ nke ebo Kayhan onye buru ụzọ biri na Beypazarı. A mụrụ nna ya Asım bey na Diyarbakır na 1924. [More ...]
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu nyere akwụkwọ ozi gbasara mkpebi ịbugharị ụlọ ọrụ Galata, nke bụ ihe onwunwe obodo, na Mịnịstrị nke Omenala na Ọgagharị. O doro anya na Onye isi ala Imamoglu degaara Mehmet Nuri Ersoy, Minister nke Omenala na Nleta Anya [More ...]
EGİAD Edobere Onodu aku na uba
Ndi A ahia Aegean Young Businessmen Association EGIAD haziri nzukọ omumu ihe omumu banyere “Macroeconomic Outlook na Mkpoko Akpagbu” iji kparita ma tuputa ihe banyere oria Covid19 na onodu aku na uba. Odeakwụkwọ ode akwụkwọ maka ndị otu EGİAD [More ...]
Njem Ọdụ nke Ọha na ebili na Istanbul
Mgbe ihe omume Covit-19 bidoro ịpụta, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-apụ n'okporo ụzọ na ngwụsị March. Agbanyeghị, n'ime izu ikpeazụ nke Eprel, edere ịrị elu nke 30,4 pasent ma ọ bụrụ na njedebe nke March. Onu ogugu nke onu ogugu [More ...]
Olee mgbe 42 Ọdụ ụgbọ oloko nke XNUMX Evler ga-akwụsị?
Ọrụ na-aga n'ihu na ọdụ Izmit 42 Evler na ahịrị ọhụrụ dị n'etiti Arifiye na Pendik nke ụgbọ oloko ga-eji rụọ ọrụ. A na-atụ anya na ọdụ ahụ ga-emeghe na August. Dabere na akụkọ banyere Muharrem Şenol si Özgür Kocaeli; “Traingbọ oloko n'ime obodo Izmit 42 Evler [More ...]
Asphalt Paving na Izmit Gültepe Junction Emechaala
N'ịga n'ihu na mbọ ya iji mee ka njem bụrụ nke dabara adaba na obodo ahụ, Kocaeli Metropolitan Obodo emechiela ụzọ okwute ahụ na nkwụsị ihu na Orduevi na Izmit Büyük Seka Tunnel n'izu gara aga. Sayensị [More ...]
Ngwa bidoro akwụkwọ ụgwọ inwere ego bidoro na İzmir
Ngwa amalitela ịnata maka akwụkwọ “na-echere ka echere”, nke hibere na Izmir mgbe Istanbul gasịrị. Ndị debanyere aha, bụ ndị nwere nsogbu akụ na ụba n'ihi ntiwapụ nke ụwa, nwere ike ịchekwa ego mmiri ha na sistemụ site na weebụsaịtị "Biz İzmir". [More ...]